आफ्नै पसलमा काम गर्ने युवती राम्रो लागेपछि एक सयमा पसल बेचेर हिँडेपछि… – My Blog
आफ्नै पसलमा काम गर्ने युवती राम्रो लागेपछि एक सयमा पसल बेचेर हिँडेपछि…
No Comments on आफ्नै पसलमा काम गर्ने युवती राम्रो लागेपछि एक सयमा पसल बेचेर हिँडेपछि…
हरेक कम्पनी वा पसलेले काममा सहजताकालागि मजदुर वा कर्मचारी राख्ने गर्दछन् । यस बापत कम्पनीले उनीहरुलाई समझदारी वा कम्पनीको नियम अनुसार तलव वा पारिश्रमिक दिने गर्दछन् । काम मन परेमा प्रमोशन वा तलब बढाउने गरीन्छ । तर एक मालिकले भने कर्मचारीको कामबाट यति प्रभावित भए कि उनले कर्मचारीलाई नै पसल बेचिदिए ।
अमेरिकाको कनेक्टिकनमा एक सैलुन मालिकले आफ्नो सैलुनमा काम गर्ने महिला कर्मचारीको कामबाट प्रभावित भएपछि आफ्नो पसलले उनलाई बेचिदिए । पसलमा काम गर्न राखेकी कर्मचारीको कामबाट मालिक यति प्रभावित भए कि उनले पूरै पसल ती कर्मचारीलाई मात्रै १ सय रुपैयाँमा बेचिदिए ।
पियो इम्पेरती नामक सैलुनका मालिकले सैलुनमा काम गर्ने हेयर स्टाइलिस्ट क्याथी मौरालाई १ डलरमा आफ्नो पसल बेचेका हुन् । क्याथी मौरालाई हाइस्कुल पास भएपछि उनैले पहिलो काम दिएका थिए । उनको काम र असल व्यवहारका कारण पियोले उनीसंगको मित्रता रहिरहोस् भनेर आफूले केवल १ डलरमासैलुन बेचेको बताएका छन् ।
७९ वर्षीय इम्पेरती अब स्वतन्त्र ठेकेदारको रुपमा काम गर्न थालेका छन् । इम्पेरतीले १९६५ मा सो व्यवसाय सुरु गरेका थिए । ३२ वर्षीय मौराले हाइस्कुलको पढाई पुरा भएपछि अनुभवको अभावमा उनलाई कसैले काम दिएका थिएनन् । सोहि बेला एक शिक्षिकाबाट इम्पेरतीको नम्बर पाएकी उनले फोनको आधारमा त्यहा काम पाएकि थिइन् ।
अब पसल क्याथीको भएको छ । अब उनले केवल कोठाको मासिक भाडा तिरेको भरमा हजारौं डलर खर्चेर बनाइएको सैलुन पाएकी छिन् । पसल धनी बनेपछि क्याथीले आफ्नो सैलुन चलाउने सपना पुरा भएको बताएकी छन् ।
← एककासि उडिरहेको हवाईजहाजमा यात्रु बेहोस भएपछि हवाईजहाज अन्ताई मोडियो! हेर्नुस् यो समाचार ! → अब फेसबुकमा नयाँ दुनिया पाईने, एकै ठाउँमा प्रत्यक्ष रुपमा बोलेकोजस्तै आभास हुने